Nagu Saabsan – Wasaaradda Horumarinta Maaliyadda – JSL
Wasaaradda H.Maaliyada JSL waajibaad-keedu waa mid dastuuriya, waxaanay shaqadeedu tahay dajinta iyo maaraynta Miisaaniyad iyo kharashaad ku haboon ilaha maaliyadeed ee Dawlada. Waxay sidoo kale masuul katahay hubinta habsami u socodka midaamka maaliyadeed ee ay u idmantahay, iyo waliba kor-joogtaynta iyo xisaab-celinta kharashaadka Wasaaraddaha iyo Hay'adaha Dawladu galaan. Wasaaradda H.Maaliyadu iyadoo ka duulaysa awaamiirta uu farayo Xeerka Maamulka iyo Maaliyadda Xeer Lr. 75/2016, waxay isbedelo doora ku wadaa hore-udhigida iyo dardar-galinta habsami u socodka masuuliyada qaran ee ay u xil-saarantahay.
Horumarinta iyo abaabulka dakhli ururinta, jiheynta maamulka maaliyadda iyo dhaqaalaha guud ee dalka. Dejinta siyaasado abdo leh (hufan) oo horseed u ah isla-xisaabtanka, daah-furnaanta iyo horumarka waara, muddada fog.
Wasaarad hanata nidaam maamul maaliyadeed oo hufan oo waara iyo horumar dhaqaale.
Shaxda Dhismaha Wasaaradda
Madaxda Sare ee Wasaaradda
Md. Muuse Ibraahim Yuusuf (Selef)
Md. Maxamed Cabdi Gurxan